SomaliTalk.com » 2010 » October » 23
Home » Archive Maalinta October 23rd, 2010
Xeer Hoosaadka Baarlamaanka FKMG ah Muxuu ka qabaa Noocyada Codbixinta Baarlamaanka KMG
iyo Kulankii baarlamaanka ee la filayey Sabtida oo la baajiyey…. “Codbixintu waxay noqon kartaa Qarsoodi ama gacan taag.. …” .. “Codbixinta lagu ansixinaayo xukuumadda iyo barnaamijkeeda waa magac ugu yeerid.”.. “Haddii ay codsiyo badan oo kala duwan yimaadaan waxaa mudnaanta iska leh codbixinta qarsoodiga ah.” Sidaas waxaa dhigaya qodobka 43aad ee...
Buugga Thesiska ee uu June 2009 qoray Maxamed C. Maxamed Faramaajo ayaa nuqullo ka mid ah waxay gaareen xildhibaanada baarlamaanka FKMG, taas oo sababtay in Madaxweynaha DFKMG, Sheikh Shariif, uu Arbacadii Oct 20, 2010 xildhibaanadda u jeediyo khubad ku saabsan buuggaas. Waxa kale oo Sheikh Shariif baarlamaanka u caddeeyey in xukuumaddiisu ku dhisan tahay 4.5, hadalkaas oo ka dambeeyey kaddib markii...
“Nimaan waxa jooga garani, waxa soo socda ma garto,” maahmaah Soomaaliyeed. Afeef: Marna shaki ma gelinayo Soomaalinnimada macallin Cabdi Samatar, laakiin waan ku dhaliilayaa weerarka qaawan ee uu ku qaaday raysalwasaare Farmaajo. Qoraal ku soo baxay bogga Somalitalk.com ayaa macallin Cabdi Ismaaciil Samatar ugu gefey raysalwasaaraha dhowaan la magcaabay ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Maxamed...